Ogaden News Agency (ONA) – Faallo:14 Safiir oo hal mar fiilo u gashay Madaxtooyada Eriteria iyo waxay soo mareen dib u xasuusta! By: Xaaji M/Rashiid
Faallo:14 Safiir oo hal mar fiilo u gashay Madaxtooyada Eriteria iyo waxay soo mareen dib u xasuusta! By: Xaaji M/Rashiid
Posted by Daljir	/ May 25, 2016
Sooyaalka taariikhdu waa macalinka dhabta ah ee ka dhaxeeya Bani’aadamka isla markaana ay cid waliba fahmayso luqada uu ku hadlayo isagoon tarjumaan u baahanin. Halganka kasocda Ogadenya iyo Ehelkiisa waxaa lagama maarmaan u ah inay mar walba labada indhood mid ku hayaan waxay soo mareen umado fara badan oo soo qaaday jidka kulaylka badan ee Gobanimo,doonimada. Markaan kaligay isla shiray een wax iska waydiiyay Umadihii soo halgamay, waxa iila adkaysi badnaa labada Urur ee kala ahaa ANC oo Usha u haysay Madoowgii ree Koonfur afrika iyo ururkii EPLF oo gadhwadeen u ahaa ree Eretariya. Labadaa qolo oo raadkoodii qoyanyahay ayaan u baahnayn in sharraxaad badan laga bixiyo marba hadii goobjoog loo wada ahaa siday wax u dhacayeen.
Faaladan oon maanta is leeyahay way ku haboontahay waqigan, waxaan diiradda kusaari doonaa idanka ilaahay dalka Eriteriya waxay soo mareen iyo xaalka ay maanta kusugunyiin. Sida dad badani ogyihiin Eriteriya waxay ahayd qoowmiyad gaar u taagan oo xor ah oo la qabsaday inkasta uu calankooda maanta babanaya soomaray marxalado oo is badal lagu sameeyayay marar kala duwan, hadana asal ahaan waxay ahaayeen umad xor ah oy xoog ku qabsadeen Guumaystayaal kasoo jeeda Qoowmiyada Axmaarada oo waqtigaa haystay fursad iyo Naasnuujin gaar ah oy ka heleen Quwado shisheeye oo is tusay inay samaystaan saaxiib adag oo lagu garab istaago jujuubka umadaha Geeska Afrika lugahana uga xidha, si ay ugu sahlanaato inay ka fushadaan danahooda gaarka ah. Waxaa xusid mudan in loo caleemo saaray darajada boqortooyada oo ahayd been lasoo dhoodhoobay, hase ahaatee waxay ilaaween in boqornimadu ku timaado rabitaanka umadaha ee ayna ahayn mid khasab qiimo ku leh!
Dadka Eriteria oo caqiido ahaan ka kooban laba qolo oo kala ah Muslimiin iyo Masiixiyiin ayaa waxay ku qasbanaadeen inay u midoobaan cadowgooda iyagoon waxba kasoo qaadin taageeradii ay Reer Galbeed iyo Ree Bariba ku taageerayeen Taliskii Dhargiga ee uu horkacayay Digtaatoor Mangistu. Halkaa waxay ku beeneeyeen dacaayada Riqiiska ah ee tidhaaha” Tigreega la iskama dul qaadi karo oo waxaa taageera Maraykan iyo Yurub oo siiya dhaqaale badan” Waxaa xaqiiq inayna is hortaagi karin Rabitaanka bulsho soo indha cad, balse dib udhac way ku keeni karaan halgankooda.
Waxyaabaha ay Dawlada Eriteria la kulmeen kadib xornimadii waxaa ka mid ahaa in la damcay in lagala noqdo xornimadii waxaana Fikirkaas aaminsanaa kii Doqonka ahaa ee bakhtiyay ee Meles Zenaawi isagoo ficil ahaan ku muujiyay oo qaaday talaabo Milatari. Abaal laawe Meles oo caan ku ah inuu kolba qaniino cidii gacanta soo qabatay ee caawin jirtay ayaa ku hongoobay isku daygaas! waxaan filayaa inaad la socotaan inay jabhadii eriteria ay umadaha kusoo dhex dartay qowmiyada Tigreega oon caano iyo biyo toona ahayn. Waxaan farta ku fiiqayaa in dagaalkii dhexmaray Eriteria iyo Itoobiya uu ka waynaa mid xuduudeed oo uu ahaa mid ay dabada ka riixayeen quwado shisheeye si mar labaad Guumaysi loo galiyo ree Eriteria.
Su’aashu waxaa weeye- xagay ku dambaysay siyaasadii khiyaaliga ku dhisnayd ee noocaas ahayd? Waxaa dhacday inay fashiliyeen guud ahaan cidii aaminsanayd arinkaas haday Cadaayeen iyo haday madoobaayeemba. Eriteria waxaa la saaray cuna qabatayn halis ah oo heer caalami ah shacabkeediina waxaa loo garaacay Daasadaha si loo qixiyo, ujeedaduna waxay ahayd- maxaad Tigreega iyo Meles ugu rukuuci waydeen? Markii lagu guuldaraystay in la burburiyo jiritaankooda ayuu aduunku dib u liqay candhuuftiisa waana laga maarmi waayay Badwaynta Eriteria ee maxaa xigay?
Waxaan Ahristayaasha dib u xasuusinayaa dhacdadii 3 bilood ka hor ka dhacday Madaxtooyada Asmara taasoo ahayd in 14 Dawladood oo ka kooban caalamka ay Safiiradoodu hal mar saf u galeen President Afewarqe oy Wajigiisa ka muuqatay isku kalsooni buuxda. Safiirada ayaa kasocday Qaarrada Amerika, Yurub, Asia iyo Afrika intaba. Waxaa jirta xikmad odhaneysa hal sawir wuxuu u dhigmaa 10000 eray ee si warkuba usoo gaabto ku qor Youtuubka (Eritrean President Isaias Afewerki receives credentials of 14 Ambassadors) kadibna daawo-
Hadaan soo gaadhay guntii iyo gabagabadii waxaan kusoo xidhayaa damaashaadkii ay qabanayeen qurabajoogta Eriteria ee 25 guuradooda iyagoo casuumad u fidinayay jaaliyadaha Ogadenya oo ah kuwo awoodooda aan la dhayalsan karin, inuu ahaa mid si cad u muujinaya guushooda. Waxaa sidoo kale hubaal ah xidhiidhka ka dhaxeeya labadaa shacab oo maalmihii lasoo dhaafay kuwada sugnaa Xafladaha, inay Taliska Adis Ababa ku reebeen Xasaasiyad iyo murugo.
Isu wada geeyoo Dadka iyo Dalka Eriteria ayaa maanta ku naaloonaya Farxad iyo Rayrayn, Qowmiyadaha wali ku hoos jira guumaysiga Itoobiyana u diraya fariin ah- inayna dib u laabanin!